Hevitra MPANOHARIANA | Febroary 2021 |
Fa inona no nahazo ny mpitarika Miara-manonja?
2021-02-20 @ 20:50 in Ankapobeny
Hagagana ny ahy raha tsy nahita mpitarika miara-manonja teny an-kianja tamin'ity fotoana lehibe nomen-dry zareo androany 20 febroary 2021 ity. Mpanaraka politika sy mankafy io taranja io aho na dia haratsiana tahaka ny inona aza izy io, satria izay no nanalehibe ahy fa fihetsika iray itiavako ny tanindrazako izany.
Nisy ve ny zavatra tsy nampoizin-dry zareo tamin'ny fihetsiky ny mpitondra sy ny mpanaraka sa tsy "intelligent" araka ny averimberin-dry zareo tampoka ry zareo, sa nisy fifandraisan-tendro hamadihana ny "tolona" tao?
Fanazavana nataon-dry zareo tamin'ireny hoe fitsangatsanganana ireny, raha mbola natao ankamantatra ny toerana, ny hoe inona no mahamaika amin'ny toerana andehanana raha tsy fantatra akory ny toerana iaingana?
Fa nahavariana kosa tamin'ity androany ity, nolazaina ny toerana handehanana fa tsy fantatra ny toerana iaingana... Nahoana? Satria ve afovoan-tanàna no kendrena handehanana? Nefa ny zavatra tahaka izao indrindra no tena ilàna izany. Tadidiko indrindra ny tolona 1991, Fivoriana isaky ny Asabotsy teny amin'ny Coum 67ha mialoha ny hidinana an-dalambe. Ny fotoananay Firaisana voalohany dia teny amin'ny Lycée Moderne Ampefiloha no nizotra ho eny amin'ny kianjan'ny 13 mey.Fa androany taiza moa izany? Ny MFM no nanana olona ho mpitarika tamin'izany tolona izany...
Raha izaho ilay mpitarika dia toerana enina raha kely indrindra no natao fiaingana, ary nezahana hanakaiky araka izay azo natao io kianjan'ny 13 mey io izany, fa ny tena mety dia toerana 12.
Andeha omena ny fisalasalana ary fa tsy homelohina befahatany ny mpitarika tamin'ny fahadisoana bevava nataony. Andeha atao hoe notarafina daholo ny fepetra noraisin'ny antokon-tafika malagasy hiatrana manoloana ny miara-manonja. Hita tsara hoe taiza sy taiza avy ny toerana nofehezin'ireo mpitandro ny filaminana ireo.
Saingy hatramin'ny fotoana nanoratana dia taratasy fanambarana sy fanamelohana izay nitranga androany ary fandrisihana ny olona tsy hihemotra no hany nataon'ny mpitarika ary tsy nisy re feo intsony taorian'izany. Mila anareo ho lohalaharana ireo olona ireo, mila anareo manao sorona ny tenanareo manaiky hosamborina na tsara aro ireo olona ireo fa tsy navela hiraviravy tanana fotsiny.
Ny hita: nandresy ny mpitandro ny filaminana androany, nandresy tsy nisy na dia baomba mandatsa-dranomaso iray monja aza, fa afaka nanao sambo-dokotra ireo olona efa lehibe mitolona ho an'ny zanany sy ny taranany fa tsy ho an'ny tenany intsony. Mangina tanteraka kosa ireo lazaina ho mpitari-tolona ary indrisy... tsy diso tamin'ny ahiahiko aho.
Inona ilay ahiahy? Nahoana ianareo no lasa miteny hoe tsy izahay intsony no hanao tatitra fa ireo vahoaka ireo tamin'ny fotoana manokana omaly... maniraka ny olona handeha fa ianareo kosa miafina any amin'izay misy anareo? Tsy mahasahy miatrika ny antso nataon'ny CIRGN nefa tokony ho isa tombony ho anareo ireny. Raha nanatona ny CIRGN ireo efa nahazo fiantsoana ny Alakamisy teo ka notazonin'ny zandary dia nanana fahavononana kokoa ny olona, saingy toy ny alikakely mpandrisika fotsiny ianareo dia nandiso fanantenana ireo saika ho vonona ihany hilalao ilay fanorona politika malagasy tsy mahalala afa-tsy ny kianjan'ny 13 mey.